Ukusuka kwiziXeko ze3D kunye neendlela zeGIS ngo-2011-Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Ukusuka kwii-3D Iidolophu kunye neendlela ze-GIS 2011
Uhlelo lwesithathu lweMagazini ye-Geoinformatics ifikile, inemixholo enomdla. U-Eric Van Rees uyasimangalisa kuhlelo olufutshane lokungena, emva kokubonakala kwakhe kwi-Globalgeo ye I-Barcelona, ​​apho uthi ukhuthazwe ukubhala inqaku elikhethekileyo -ukuba siya kubona ngokukhawuleza- ekubekweni kwesoftware evulekileyo kwintengiso ye-geospatial. Ke kwiphepha lama-22 ukuya kwelama-23 ucacisa ngakumbi, nangona ixesha elithile siwubonile umdla wakhe kubuchwephesha obuvulekileyo kunye nendlela yokufikelela kumanyathelo e-Hispanic, ukubonakala kwinqanaba lakhe kubalulekile ukudala ulwazi ngakumbi ngento esiyaziyo, kodwa yintoni Kufuneka sizinze kwi-incursion eneeprojekthi ezinje nge-FOSS4G. Akubalulekanga kangako ukuba abo kuthi sele bebandakanyekile kule nto bayive, kodwa kunoko abenzi bezigqibo kwinqanaba leenkampani zabucala, oorhulumente kunye neenkampani ezithengisa izixhobo zobunini kunye nesoftware yeempawu ezaziwayo.
Imizila eya kwii-3D Cities
Kukho inqaku lonke malunga zendlela ukuba iBentley inethemba lokuba impahla yeBentleyMap kunye nokuxhaphazwa kwayo I-imizekelo. Amaphepha amathathu apheleleyo anikezelwe kwinto enokuba ngumbono wokuba iinkampani ezinkulu zesoftware zinayo kwi-niche ethetha ukudibanisa izixeko ezikhulu kwiimodeli ezinamacala amathathu apho, endaweni yokuthumela umyalezo ngeparallelo, ifuna ukudibanisa izinto ezahlukeneyo zokuzinza kunye nocwangciso lokusetyenziswa komhlaba kuthungelwano lwezixhobo .
Ndikhumbula umxholo ovela eBaltimore, kugxininiso olunikezelwe kulwakhiwo, unxibelelwano olwenziwe ngumntu ukunxibelelana nendalo. Kodwa umoya awukho ekuhlalutyeni izinto ngokukodwa-oko kuyenziwe kakade-kodwa xa zizonke kwaye ndizama ukuguqula ibe zi-algorithms ubudlelwane obuntsonkothileyo obukhoyo kuyo yonke inethiwekhi kunye nokuguquguqukayo kobubanzi besine: ixesha kunye nobudlelwane nexabiso.
Ngumxholo we-astral wamazwe ethu ase-Hispanic, apho izinto eziphambili ziphambi, phantse zonke ngenxa yesiko lezopolitiko zethu -kuba umntu kufuneka atyholwe-. Kodwa ukubona into eza kwakhiwa nguHelsinki eFinland, eMontreal eCanada naseRotterdam eNetherlands kuya kuba luncedo kuvavanyo nasekuhleleni izinto esiza kuzikhuthaza kwiminyaka embalwa kamva ngemali encinci, ngomnye umxholo. Inzuzo ikwiindlela, iimodeli ezicwangcisiweyo okanye ubuncinci esekwe kwimigangatho ye-OGC eya kuthi ihloniphe iinkqubo zoMthombo oVulekileyo kunye nezo zinobunkunkqele ezingaziphakamisiyo xa bethetha ngombono weBIM.
Kodwa akufuneki sibalahle njengemicimbi engasebenzi kwimeko yethu. Izixeko kufuneka ziqwalasele ukucwangciswa kommandla ngokubaluleka okuphezulu, ukusetyenziswa komhlaba kubalulekile hayi kuphela ukubonisa imephu entle epeyintiweyo. Impembelelo yokuqhushumba kwabantu kuvelisa ukungcoliseka kwendalo kunye nokukhutshwa kwegesi, ubudlelwane bayo notshintsho lwemozulu, iintlekele zendalo kunye, nokukhula kwemithombo yendalo ngokuzinzileyo, kufuneka kuthathelwe ingqalelo.
Geomarketing kunye neGoogle yeGIS
Eli lelinye inqaku elinomdla elisekwe kwimo engenakuguqulwa ephethe into eyayisaziwa njengeClearinghouse, ngoku sele ikhule ngakumbi ngendlela ebanzi yee-IDE. IVoyager sisisombululo esifuna ukusombulula ukuphathwa kwedatha yendawo ngokuququzelela ukufikelela kukhangelo olulula kunye nokusebenza konxibelelwano kumanqanaba ahlukeneyo abasebenzisi beCAD / GIS.
Ndikucebisa ukuba ujonge, kuba ngokuqinisekileyo uGoogle uhamba apho. Okwangoku iimephu zikaGoogle kunye noGoogle Earth bakhona, kodwa kuphela ngabajongi bedatha yendawo; Onke amaphepha ewebhu, iibhlog kunye namaxwebhu ayaqhubeka ukukhangelwa ngendlela engabonakaliyo kwifom kaGoogle, ngokungena kweenethiwekhi zentlalo enye enye idata yebhanki yongezwa: abantu. Kodwa umbono wokujonga izinto ezinxulumene ne-geometri ethile yejografi isesidingo esikhulu kwaye Uhambo Ungomnye walabo bafuna ukunikela into ngaphaya koku.
Ngaba i-satellites iya kufa kwi-2012?
Ngethuba elidlulileyo ndincoma ukuba ubukele i-movie ukwaziIntsomi ebubudenge yesayensi, kodwa isekwe kwizifundo zesayensi ezixela kwangaphambili ukuba u-2012 uya kuba ngunyaka apho umjikelo we-sunspot uza kufikelela kwincopho yawo ephezulu xa sinendawo egutyungelwe ziisathelayithi. Ifilimu ka-2012 yongezwa ngenye indlela engacacanga yokuyila kwaye kwelinye icala ukutolikwa kwamanani kaMayan angenakho nokuqikelela ukutshatyalaliswa kwayo ngoku kubuyisela amandla kwaye kongeze incasa embi ye-gringo cinema yokugcina abantu kuxinzelelo ukufa.
Ewe, njengoko kusaziwa, iisathelayithi ezininzi ngoku ezingenajukujuku zonakaliswe kukuqhushumba kwelanga. Kwaye ukufa kuye kwathatha uninzi lweenwele, ezikhankanye ukuba ngo-2012 lonke iqela leesathelayithi ezisivumelayo ukuba sisebenzise iGPS zinokonakala. Enye i-Y2K eya kuthi isinciphise kancinci, kodwa cinga ngokuhamba ngenqwelomoya, isicelo emhlabeni, elwandle, ukuthuthwa kweengalo ... kunjalo. Ukuba bayawukhupha lo mbandela kwaye bathi iisathelayithi ezenza i-Intanethi isebenze, ukuba ziguqula wonke umntu ... cinga iveki ngaphandle kokufikelela kuyo yonke into esinayo kwi-imeyile, uf! Andiyicingi nokuyicinga.
Kubukeka ngathi kufana noqhinga olujoliswe kwiNkqubo HAARP. Kodwa ndincoma ukuba ujonge inqaku apho lithetha ngokuqhubela phambili kweNkqubo yokuSebenza ngeSathelayithi ye-Global Navigation (GNSS).
Ndikucebisa ngokuya kwindawo kunye nokufunda umba; ukhetha ngokukhuphela njenge-PDF kwingqokelela yakho, hleze ifikeleleke kwi-Intanethi ngoMeyi 17, 2012, XD. Emva kwexesha kukho eminye imisi ebandakanya i-ESRI, i-Intergraph, iLeica kunye neBentley.
Iinkqubo ezili-13 ze-GIS onokungazi ngazo